Iindaba -Izixhobo zeNkqubo yaMandla oMbane eSola
Inkqubo yombane yelanga epheleleyo ifuna izinto zokuvelisa umbane, ukuguqula amandla abe kukutshintsha okukhoyo kunokusetyenziswa kwizixhobo zasekhaya, kugcinwe umbane ogqithisileyo kunye nokugcina ukhuseleko.
Iiphaneli zelanga lelona candelo libonakalayo lendawo yokuhlala yombane welanga. Iiphaneli zelanga zifakwe ngaphandle kwekhaya, zihlala eluphahleni kwaye ziguqula ukukhanya kwelanga kube ngumbane.
Iziphumo ze-photovoltaic yinkqubo yokuguqula ilanga libe ngumbane. Le nkqubo inika iiphaneli zelanga elinye igama, iiphaneli zePV.
Iiphaneli zelanga zinikwa ukulinganiswa kwemveliso kwii-watts. Eli nqanaba liphezulu liveliswe yiphaneli phantsi kweemeko ezifanelekileyo. Iziphumo zepaneli nganye ziphakathi kwe-10 kunye ne-300 watts, kunye nee-watts eziyi-100 kuba sisimo esiqhelekileyo.
Solar Array Ukunyuka kweeRacks
Iipaneli zelanga zidityaniswe zadweliswa kwaye zihlala zixhonywe kwenye yeendlela ezintathu: eluphahleni; ezibondeni kuluhlu lokuma simahla; okanye ngqo emhlabeni.
Iinkqubo ezixhonywe eluphahleni zezona zixhaphakileyo kwaye kunokufunwa yimimiselo yocando lwemida. Le ndlela inobugcisa kwaye iyasebenza. Eyona nto iphambili kukuphakama kophahla lulondolozo. Uphahla oluphezulu, ukucoca ikhephu okanye ukulungisa iinkqubo kunokuba ngumcimbi. Iiphaneli azihlali zifuna ukugcinwa okuninzi, nangona kunjalo.
Ukuma simahla, uluhlu olupakishwe ngepali lunokuseta kubude obenza ulondolozo lube lula. Uncedo lokugcina ngokulula kufuneka luthelekiswe nendawo eyongezelelweyo efunekayo kulungelelwaniso.
Iinkqubo zomhlaba ziphantsi kwaye zilula, kodwa azinakusetyenziswa kwiindawo ezinokuqokelelana rhoqo kwekhephu. Isithuba sikwathathelwa ingqalelo kunye noluhlu lweentaba.
Nokuba uphakamisa i-arrays, i-mounts inokulungiswa okanye ukulandelelwa. Ukunyuka okuhleliweyo kucwangcisiwe ukuphakama kunye ne-engile kwaye akushukumi. Ukusukela ekujikeni kwelanga kutshintsha unyaka wonke, ukuphakama kunye ne-engile yolungelelwaniso lwentaba olungatshintshiyo kukungqinelana okurhweba ngeyona angle ifanelekileyo ngexabiso elisezantsi, elingafakwanga ukuntsokotha.
Uluhlu lokulandelela luhamba nelanga. Uluhlu lokulandela umkhondo luhamba usiya empuma uye entshona kunye nelanga kwaye uhlengahlengise i-engile ukugcina ukulunga njengoko ilanga lihamba.
I-Array DC yokuQhawula
Ukuqhawulwa kwe-Array DC kusetyenziselwa ukunqamla ukuhlengahlengiswa kwelanga ukusuka ekhaya kulondolozo. Ibizwa ngokuba yi-disc ye-DC kuba amandla elanga avelisa amandla e-DC (ngqo ngoku).
Iipaneli zelanga kunye neebhetri zivelisa amandla e-DC (ngqo ngoku). Izixhobo zasekhaya ezisemgangathweni zisebenzisa i-AC (ngokutshintshayo okwangoku). I-inverter iguqula amandla e-DC aveliswe ziipaneli zelanga kunye neebhetri kumandla e-AC afunwa zizixhobo zombane.
Iinkqubo zamandla elanga zivelisa umbane ngexesha lasemini, xa ilanga likhanya. Ikhaya lakho lifuna umbane ebusuku nakwiintsuku ezinamafu- xa ilanga lingakhanyi. Ukucima le ngxaki, iibhetri zinokongezwa kwinkqubo.
Imitha yamandla, Imitha yokuSebenzisa, iMilowatt Meter
Kwiinkqubo ezigcina iqhina kwigridi eluncedo, imitha yombane ilinganisa inani lamandla asetyenzisiweyo kwigridi. Kwiinkqubo eziyilelwe ukuthengisa amandla eluncedo, imitha yombane ikwalinganisa inani lamandla elithunyelwa yinkqubo yelanga kwigridi.
Kwiinkqubo ezingabophelelwanga kwigridi eluncedo, i-backup generator isetyenziselwa ukubonelela ngamandla ngamaxesha okuphuma kwenkqubo esezantsi ngenxa yemozulu embi okanye imfuno ephezulu yekhaya. Abanini bamakhaya abachaphazelekayo kwimpembelelo yokusingqongileyo yabavelisi banokufaka umbane ovelisa enye ipetroli efana ne-biodiesel, endaweni yepetroli.
Iphaneli yokwaphula, iPhaneli ye-AC, iPaneli yeSekethe yeSekethe
Iphaneli yesaphuli kulapho umthombo wamandla uhlanganiswe khona kwiisekethi zombane ekhayeni lakho. Isekethe yindlela eqhubekayo yocingo oluhlanganisiweyo oludibanisa izinto kunye nezibane kwinkqubo yombane.
Kwisekethe nganye kukho umaphuli wesekethe. Abaqhekezi beesekethe bathintela izixhobo kwisekethe ekutsaleni umbane omninzi kwaye zibangele ingozi yomlilo. Xa izixhobo kwisekethe zifuna umbane omninzi, umaphuli wesekethe uya kucima okanye akhubeke, aphazamise ukuhamba kombane.
Umlawuli werhafu-okwaziwa ngokuba ngumlawuli werhafu-ugcina umbane ofanelekileyo wokutshaja kwiibhetri zenkqubo.
Iibhetri zinokuhlawulwa ngaphezulu, ukuba zondla umbane oqhubekayo. Umlawuli werhafu ulawula umbane, ukuthintela ukutshaja kakhulu kunye nokuvumela ukutshaja xa kufuneka njalo. Ayizizo zonke iisistim ezineebhetri: ngakumbi kwiindidi zeenkqubo, bona: Iindidi ezi-3 zeeNkqubo zaMandla eSolar Solar.